Forex Kutengesa Akaunti - Yakanaka Forex Maakaundi, Vhura Chaizvo Akaunti Zvino neFXCC
PaFXCC tinopa huwandu hweECN
maakaundi kukodzera vatengesi vese.
Chero hupi huwandu hwako hwekutengesa
ruzivo kana zvinodiwa, tinotenda
isu tine account kwayo iwe
ZIVISA ECN ACCOUNT NOW
Variable Inopararira Kubva 0.0 Pips Kwete basa
Aihwa Minimum Deposit 0.01 Roti zera 1: 500 Max Kuwedzera Free Mari 100% Yekutanga Deposit bhonasi ECN Type Kuuraya EA Available Islamic Account Hedging Kubvumidzwa
Inoyerera Kubva ku0.0 pips
Hapana Chishoma Dhipoziti
Minimum Lot Lot
100% Bhonasi Pakutanga Deposit *
Inowanikwa Base Mari
Mari Yekubhadhara mari
New York, London, Germany, Hong Kong
Forex, Metali, Simba, maIndices
Kutengesa Nhau Kunotenderwa
Chinjana-Mahara Islamic Akaundi
Kwete Min. Mira Kurasikirwa Kure
* Bonus Mitemo & Mamiriro
Tanga neIndaneti Yekutengesa Demo Dzisina Ngozi
Kunyangwe yako nyowani kana ane ruzivo mutengesi, njodzi yemahara demo account inzira yakanaka yekuwana zvakanakira ECN kutengesa neFXCC. Dzidzira hunyanzvi hwako hwekutengesa forex kana kuyedza matsva matsva ne zero kudyara.
Real-time price and real forex market market Ona chati, nhau uye kuongorora
Kuwanika kwakazara-inoshandiswa Metatrader4 kushambadzira platform Dzidzira kutengesa ne $ 10.000 mari chaiyo
TARISA ECN DEMO ACCOUNT
Nhoroondo yedu ye ECN XL ine zvinhu zvose uye zvikomborero zvaungatarisira uye zvinotarisirwa kubva kune ECN / STP mutengesi uyo ave achinyatsopera pamagetsi ekugadzirwa kwebhizimusi. Imwe mutengesi uyo akabatsira kugadzira ramangwana rebhizimusi. Zvechokwadi paFXCC tinotenda kuti iyi ECN account haisi yepamusoro zvachose. Ndiyo imwe yepamusoro-soro mabhizimusi makambani, akazara zvizere zvezvinhu uye zvinobatsira, izvo zvino zviripo mumhizha ye forex.
PaFXCC tinowanzoshandisa chirevo chatakatora pamusoro pemakore; "kubva kumaacorn madiki miouki mikuru ichakura". Wese mutengesi weECN anotanga kumwe kunhu ndosaka wese mutengi weFXCC achibatwa semunhu, VIP, uyo anofarira rake rega, risingaenzaniswi revhisi. Vatengi vanogona kuvhura account yeECN XL uye vanakidzwe nero imwechete yekuzvipira kwakazara rutsigiro uye sevhisi sekunge vari VIP mutengi. Iwe unozonakidzwa nekukwira kusvika pa1: 500 uye iwe unozogona kutora mukana weiyo ECN / STP modhi yekutengesa forex isu takabatsira kupayona.